सुशान्त प्रकरण: रियाले गरिन् सिबिआइ जाँच बन्द गर्न माग, परिन् संकाकाे घेरामा…. – Jagaran Nepal
सुशान्त प्रकरण: रियाले गरिन् सिबिआइ जाँच बन्द गर्न माग, परिन् संकाकाे घेरामा….
सुशान्त सिंह आत्मह’त्या के’समा सबैभन्दा बढी मुछिएकी पात्र हुन् सुशान्तकी कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्ती। अहिले सबैको सोधखोज रियामै अडिएको छ। सुशान्तका फ्यानहरू रियामार्फत सत्य जान्न चाहन्छन्। सिबिआइ जाँच सुरू भएपश्चात रियाका मुस्किलहरू बढेका छन्। सुशान्तसँग जोडिएका अनेक आ’रोपहरूसँगै लगातार पुलिस स्टेसनको च’क्कर का’ट्नु परेको छ।
आफू चारैतिरबाट घेराउमा परेपछि रियाले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन सुप्रिम को’र्टमा एउटा लिखित ब’यान या भनौँ सपथ पत्र पेश गरेकी छन्। सो पत्रमा उनले राजनीतिको भाषा बोल्दै आफूलाई सिबिआइले अनावश्यक दुख दिएर फ’साउन खोजेको कुरा उल्लेख गरेकी छन्।’
यी तिनै रिया हुन्, जसले केही दिन पहिले आफूलाई सुशान्तकी प्रेमिका भन्दै गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेर के’समा सिबिआइ जाँचको माग गरेकी थिइन्। तर अहिले सिबिआइ जाँच भैरहँदा रियालाई आ’पत्ति छ। उनले सपथ पत्रमा सिबिआइ जाँच रोक्न अनुरोध गरेकी छन्। मुम्बई पुलिसले नै यो के’सलाई राम्रोसँग सुल्झाउन सक्ने भन्दै के’स पुनः मुम्बई पुलिसको हातमा सुम्पिन माग गरेकी छन्।
सपथ पत्रमा रियाले, बिहारमा चुनाव हुन गइरहेकाले आफ्नो सरकार बनाउन सुशान्तको के’सलाई राजनीतिकरण गरिएको र बिहार सरकारले अनावश्यक चासो देखाएको आ’रोप लगाएकी छन्। साथै सुशान्तको के’स मुम्बई पुलिसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सिबिआइको जरुरी नभएको कुरा पनि उल्लेख गरेकी छन्।
रिया मिडियासँग पनि ड’राएकी छन्। यो के’समा मिडियाको कभरेज पनि बन्द गर्न सपथमा माग गरेकी छन्। खासगरी भारतीय मिडिया रिपब्लिक टिभी जसले सुशान्तको के’समा कैयौं खुलासा गरेको छ सो मिडियालाई तुरुन्त बन्द गरिपाऊँ भनी अनुरोध गरेकी छन्।
रियाका यी सबै माग र बयान हेर्दा रिया सिबिआइ जाँच र मिडियादेखि अत्यन्तै ड’राएको देखिन्छ। रियाले आफूलाई बचाउन त यो सब गरिरहेकी छैनन् ? यो त पछि नै थाहा हुनेछ।